अर्काको WIFI पासवर्ड कसरि थाहा पाउने ? यी तरिका अप्नाउनुहोस - Enepali Online
अर्काको WIFI पासवर्ड कसरि थाहा पाउने ? यी तरिका अप्नाउनुहोस
Written by:Enepali OnlinePosted on: February 26, 2018
अहिलेको हाइटेक जमानामा सबैसँग स्मार्टफोन हुन्छ नै । स्मार्ट फोन भएपछि थ्री जी वा बाई-फाईबाट इन्टरनेट चलाउने कुरा कुनै नयाँ कुरा भएन । तर कहिले काँहि बाहिर निस्किँदा वा आफ्नो इन्टरनेटले काम नगर्दा नेट चलाउन नपाएर छटपटी हुने गर्छ ।
यस्तै अवस्थामा कसैको बाई-फाई पासवर्ड थाहा पाउन पाए ! पक्कै रमाइलो हुन्छ ।
कलेज, मल वा सिनेमा हलमा बाई-फाईका ओपन नेटवर्क हुने गर्छन् । तर पासवर्ड विना इन्टरनेट चलाउन पाइँदैन । तर तपाइँले सहजै यस्ता नेटवर्कका पासवर्ड थाहा पाउन सक्नु हुन्छ ।
यहाँ पब्लिक बाई-फाईको पासवर्ड थाहा पाउने तरिका उल्लेख गरिएको छः
१- बेष्ट बाई-फाई नेटवर्क ह्याकर
यो एप बनाउने कम्पनीले जस्तो सुकै पासवर्ड पनि आफ्नो एप्लिकेसनबाट एन्क्रिप्शन तोडेर पत्ता लगाइदिने दावी गर्छ । यो एप पब्लिक वाइफाइलाई पासवर्ड ह्याक गर्न चर्चित मानिन्छ ।
१- हाऊ टू ह्याक वायरलेस नेटवर्क
यो पनि अर्को एप हो । जसले वाइफाइ पासवर्ड ह्याकिङको ट्यूटरियल जस्तै काम गर्छ । यसलाई ऐथिकल ह्याकिङ समेत भनिएको छ । यसले वाइफाइ पासवर्ड प्रोटेक्सनका लागि बनाइएको एल्गोरिथम ह्याक गर्न पनि सिकाउँछ ।
३- बाई-फाई ह्याकर
वाई-फाई ह्याकर बीएनजी पनि चर्चित पासवर्ड ब्रेकिङ एप हो । यो एप इन्स्टल गरेपछि ओफन वाइफाइ नेटवर्क रेञ्जमा जानुस् र यसले तपाइँको चाहाना पुरा गरिदिन्छ ।
४- ह्याक बाई-फाई पासवर्ड
यो एप पनि गुगल प्लेमा निशुल्क उपलब्ध छ । यसले केही सेकेण्डमा बाइफाइ पासवर्ड पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । तपाइँलाई अचम्म लाग्ला अहिले सम्म १० लाख भन्दा बढी मानिस यो इन्स्टल गरिसकेका छन् ।
५- फाइण्ड माइ राउटर्स पासवर्ड
डिफल्ट पासवर्ड रिकभरी, म्यानुअल पासवर्ड रिकभरी तथा डिक्सनरी पासवर्ड रिकभरी जस्ता फङ्कसन भएको यो एप तपाइँका तपाइँका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ । नयाँ राउटर किनेपछि यसको पासवर्ड थाहा नहँदा समेत यो एपले पत्ता लगाइदिन सक्छ ।
Previous Post Previous post: लालबाबुको पहिलो कदम -नियम बिपरितका तारे होटल,सिमेन्ट उद्योग र अस्पताललाई कारवाही
Next Post Next post: रेशम चौधरीले अदालतसामू गरे आत्मसमर्पण
सिरियाको पक्षमा उभियो उतर कोरिया,रासायनिक हातहतियारको सहयोग !
बोनी कपुर आफैंले सुनाए श्रीदेवीको दर्दनाक मृत्युको दृष्य, खासमा यसरी गएको रहेछ श्रीदेवीको ज्यान ! बोनिले बिबिसीलाई बताए सबै बिस्तारमा …
प्रचण्ड र ओलिविच सक्कियो भेटवार्ता ! यस्ता भए निर्णय, कार्यकर्तालाई समेत आयो सुझाव